Indawo yokuhlala "eLe Carbonaie" - I-Airbnb
Indawo yokuhlala "eLe Carbonaie"
Iflethi okanye indlu ekwicomplex elungele iholide yakho, ekumgangatho wokuqala wendawo yokuhlala entle, uhamba imizuzu embalwa ukusuka embindini kwaye, ngemoto, usuka elwandle.
Igumbi lokulala elilala abantu ababini elinendawo yokuhlambela efestileni, igumbi lokulala elilala abantu ababini elinendawo yokuhlambela, igumbi lokuhlala elineTV nesofa ekwayibhedi, ikhitshi elincinci. Ityeya entle egqunywe kakuhle nenendawo yokubuka ulwandle igqibezela indlu. Indawo yokupaka yabucala ebhatalelwayo. Indawo yokwenyani yoxolo noxolo kolunye unxweme oluhle lweMaremma Tuscany.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle eCapalbio, uhamba imizuzu eyi-5 ukusuka edolophini, nemizuzu embalwa ngemoto usuka elwandle.
Igumbi lokulala elilala abantu ababini elinendawo yokuhlambela negumbi lokulala elilala abantu ababini elinamagumbi okuhlambela, igumbi lokuhlala elinomabonakude kunye nesofa ekwayibhedi, ikhitshi elincinci nendawo entle egqunyiweyo. Izilwanyana zasekhaya ezincinci neziphakathi zamkelekile ibe kufuneka zivunyelwane ngazo kwangaphambili.
enegaraji Ifumaneka unyaka wonke, lithuba elihle lehlobo.
Ndikwaqeshisa nabaqeshi bexesha elifutshane.
Nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi nge-imeyile okanye ngefowuni nangayiphi na enye inkcazelo.
Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle eCapalbio, umgama wemizuzu eyi-5 xa uhamba ngeenyawo ukuya embindini nemizuzu nje embalwa xa usiya elwandle.
Amagumbi amabini okulala, elinye linegumbi lokuhlambela elinebhafu nebhedi enkulu, elinye linebhedi enye engaphantsi negumbi lokuhlambela elinomnyango ophumela ngaphandle. Igumbi lokuhlala elinomabonakude kunye nesofa enokutshintshwa ibe yenye ibhedi enkulu. Ikhitshi elincinci nendawo entle enophahla. Indawo yokupaka yabucala. Samkela izilwanyana zasekhaya ezincinci/eziphakathi, eziza kuxoxwa kwangaphambili. Iyafumaneka ukuba iqeshwe naxa ixesha elifutshane.
Ukuba ufuna inkcazelo engakumbi nceda ungathandabuzi ukuqhagamshelana nam.
4.57 · Izimvo eziyi-8
I-Capalbio yeyona lali isemazantsi kwiMaremma yaseTuscan kwaye inika iimvakalelo ezininzi kubathandi bembali kunye nendalo yasendle e, apho unokuphumla khona ngexesha elikhethekileyo nelingenalo ixesha. Imipheme eluhlaza : ukubukeka kwendawo kunye nomhlaba ongachukumiswanga, amavumba kunye nemibala eprinta ingqondo ngeemvakalelo ezintlanu. Kwabo baphupha ngeholide yaselwandle, yenye yezona ndawo zithandwayo.
Iindwendwe zingandithumelela imiyalezo , ii-imeyile kunye ne-whatsapp ukuze zifumane yonke inkcazelo eziyifunayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Capalbio